ICS Myanmar | My Website
*[Unicode]* *Product* ** *Product ကိုစဉျးစားမယျဆိုရငျတော့ ကိုယျ ပဈမှတျထားတဲ့market ကို ကိုပေးမယျ့ ဝနျဆောငျမှုနဲ့ထုတျကုနျ အတှကျ အဓိက စဉျးစားသငျ့တာကတော့ အရညျအသှေး၊ ဒီဇိုငျး၊ ထုပျပိုးဒီဇိုငျး၊ Customer တှအေတှကျဝနျဆောငျမှု၊ နောကျ မကွာမကွာပေးသငျ့တဲ့ ရောငျးပွီးနောကျဝနျဆောငျမှုနဲ့တာဝနျယူမှု (After sales service) စတာတှေ ကို အဓိကစဉျးစားရမှာဖွဈပါတယျ။* ** ** ** *Place* ** *နရောပိုငျးကို စဉျးစားတဲ့ အပိုငျးမှာတော့ ကိုယျ့ ထုတျကုနျကို ဖွနျ့ဖွူးမှုနဲ့သကျဆိုငျလာတယျ။ ပို့ဆောငျ ရမယျ့နရော၊ ပို့ဆောငျရမညျ့ နညျးလမျး၊ ကား၊ သင်ျဘော၊ လယောဉျ စသညျ စဉျးစားရနျလိုပါမယျ။ ကိုယျ့လုပျငနျးရဲ့တညျနရော၊ Resource ရရှိနိုငျမှု၊...
— October 2017 — 618 views
[Zawgyi] ကျနော် တို့ ကမ္ဘာမှာ လုပ်ငန်းခွင် အန္တရာယ်နှင့်ပက်သက်ပြီးဖြစ်စေ ရောဂါကြောင့်ဖြစ်စေ လက်ရှိ တရက်မှာ လူပေါင်း ခြောက်ထောင့်သုံးရာကျော်ဟာ သေဆုံး နေကြတဲ့ အတွက်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း 2.3 သန်းနီးပါး မသေသင့်ပဲသေကြေပျက်ဆီးနေပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ အန္တရယ်တွေနဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်ချေတွေကို လျော့ ချ နိုင်ဖို့ ISO Organization အနေနဲ့ Occupational Health and Safety Management Systems ကို ကျွမ်းကျင်သူများ ပညာရှင်များနှင့် စနစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ စနစ်မှာ ♥ လုပ်ငန်းခွင်ထဲရှိ ဝန်ထမ်းများ၏ လုံခြုံရေး၊ အသက်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ♥ လုပ်ငန်းခွင် အန္တရယ်လျော့ချနိုင်ရေး ♥ ...
— October 2017 — 630 views
[Zawgyi] What is ISO 9001. Again ? ================= ISO 9001 ဆိုသည်မှာ စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်တွေ အတွက် အသုံးပြုသော စံ (standard) ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာမှာ အသုံးအများဆုံးနဲ့ လူသိအများဆုံး စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ စံ (standard) ဆိုသည်မှာ ဥပဒေ (law) မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းများ အတွက် သဘောတူညီမှု တစ်ခု ဖြင့် အလေ့အကျင့်ကောင်း များ ကို ဖော်ဆောင် ကျင့်သုံးရသည့်စနစ် ဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ ၏ လုပ်ငန်းများ Continual Improvement(CI) စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှု...
— October 2017 — 628 views